somali / Minnesota.gov
Ku soo dhawow laanta Xuquuqul Iisaanka Menesota
Waxaanu nahay laan aan dhinacna taageersanayn oo baadha dacwadaha takoorka sharci darada ah.
Si aad wax uga sii ogaatid laantayada, takoorka sharci darada, iyo xuquuqdaada, waxaan ka xulan kartaa tusmada dhinaca bidix ku taal.
Qaamuus (Glossary) | Su"aalo (Questions & Answers)
Waxaad u baahnaan doontaa faylka nooca loo yaqaan Adobe Acrobat Reader si aad u furtid ama akhridid faylasha loo yaqaan (PDF files). HALKANI bilaash ugala soo bax Acrobat Reader.
Wixii anaga nagu saabsan (About Us)
Mowqifka Laanta Xuquuqul Iisaanka ee Menesota (MDHR: Minnesota Department of Human Rights) waxa weeyi u jeedadeedu inay xor ka ah takoorka
Waxaanu hirgalinaa Qodobka Xuquuqul Iinsaanka Menesota. Tani waxa weeyi sharci gobol oo ka ilaaliya qof kasta oo jooga Menesota takoor sharci daro ah.
Halkani riix si aad u heshid faylka loo yaqaan PDF wixii macluumaad dheeraada ee la xidhiidha:
shida aanu u ilaalino xuquuqdaada
sidaananu dhinacna u raacin
Ku Saabsan Laanta Xuquuqul Iinsaanka ee MN (PDF 199kb)
Waraysigu waa talaabada koowaad ee laantayadu ku bilaabayso habka loo xareeyo dacwada.
Markaad dacwad ahaan noola soo xidhiidhid sarkaal qaabilsan waraysiga ayaa kula kaala hadli doona dhibaatadaada. Nasiib daro cadaalad daradu in badan ayey dhacdaa, laakiin waxa kaliya oo aanu awood u leenahay inaan eegno takoorka la xidhiidha "noocyada la ilaaliyo" sababtooda.
waxa uu u baahan yahay inuu ogaado sarkaalka waraysigu
Faalo guud oo ka hadlaysa nidaamkayaga waraysiga
Waraysiga lagugula yeelanaya Laanta Xuquuqul Iinsaanka (PDF 1mb)
Xuquuqdaada (Your Rights)
Qof kasta oo Menesota degan waa qof ka magan kalay takoorka sharci daroda marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iisaanka Menesota (MHRA: Minnesota Human Rights Act).
Takoorku waxa weeyi marka qof kuula dhaqmo si gooniya ama aanu ku siin xaquuqda aad caadiyan leedahay, jinsiyadaada awgeed, da"daada, lab ama dhidig inaad tahay ama astaamo kale oo ah kuwa la ilaaliyo. Si goonaya laguulama dhaqmi karo maadaamo aad ka tirsan tahay dad gaara oo aha "noocyada ilaaliyo."
Meelaha La Ilaaliyo
Xuquuqdaada Marka loo Eego Qodobka Laanta Xuquuqul Iisaanka MN (PDF 283kb)
Takoorka Shaqada (Employment)
Takoorka shaqadu sharci daro ayuu ka yahay Menesota
Marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iinsaanka shaqadu waa "noocyada la ilaaliyo." Waana sharci daro in si goonaya loola dhaqmo shaqada marka loo eego:
Jinsiyad, Midab,Mabda, Diin,Halka aad jinsiyad ahaan ka timid, Lab ama dhidig, Inaad reer leedahay iyo in kale,La"xaad la"aan, Taakulaynta Dadwaynaha, Da,Nooca aad tahay lab iyo dhidig ama wixii u dhaxeeya, Dhaqdhaqaaqa Gudida Xuquuqul Iinsaanka ee Deegaanka.
(Si aad u baratid erayadani wuxuu micnahoodu yahay waxaad akhridaa qaamuska).
maxaa noqon kara takoorka shaqada
Waxyaabaha kambanigu ku waydiin karo marka waraysi shaqo lagula yeelanayo
sida loo xareeyo dacwada takoorka (rogaal celin)
shaqaalaha aan diwaan gashanayn
Takoorka Shaqada (PDF 205kb)
Takoorka Guriyeynta (Housing)
Takoorka guryuhu sharci daro ayuu ka yahay Menesota
Marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iinsaanka guriyeyntu waa "noocyada la ilaaliyo" ("protected area"). Waana sharci daro in si goonaya loola dhaqmo guriyeynta marka loo eego:
Jinsiyad, Midab, Mabda,Diin, Halka aad jinsiyad ahaan ka timid, Lab ama dhidig, Inaad reer leedahay iyo in kale, Heerka Qoysku taagan yahay, La"xaad la"aan, Taakulaynta Dadwaynaha, Nooca aad tahay lab iyo dhidig ama wixii u dhaxeeya.
maxaa noqon kara takoorka guriyeynta
maxaan qaban karaa
Takoorka Guriyeynta (PDF 196kb)
Takoorka Adeega Dadwaynaha (Public Service)
Takoorka adeega dadwaynuhu sharci daro ayuu ka yahay Menesota.
Marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iinsaanka Menesota adeega dadwaynuhu waa "noocyada la ilaaliyo" Waana sharci daro in si goonaya laguula dhaqmo marka loo eego:
Jinsiyad, Midab, Mabda, Diin,Halka aad jinsiyad ahaan ka timid, Lab ama dhidig, La"xaad la"aan, Taakulaynta Dadwaynaha, Nooca aad tahay lab iyo dhidig ama wixii u dhaxeeya.
waa maxay adeega dadwaynuhu
maxaa noqon kara takoorka adeega dadwaynaha
Takoorka Adeega Dadwaynaha (PDF 198kb)
Takoorka Waxbarashada (Education)
Takoorka waxbarashadu sharci daro ayuu ka yahay Menesota
Marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iinsaanka Menesota, waxbarashadu waxa ka mid tahay "meelaha la ilaaliyo" waana sharci daro in si goonaya loola dhaqmo waxbarashada dadwaynaha, ta gaarka ah, iskuulada farsamada, jaammacadaha iyo kuliyadaha in loo eego:
Jinsiyad, Midab,Mabda, Diin, Halka aad jinsiyad ahaan ka timid, Lab ama dhidig, Da (Hadii aad tahay 25 jir ama aad ka wayn tahay), Inaad reer leedahay iyo in kale, La"xaad la"aan, Taakulaynta Dadwaynaha, Nooca aad tahay lab iyo dhidig ama wixii u dhaxeeya.
maxaa noqon kara takoorka waxbarashada
Takoorka Waxbarashada (PDF 203kb)
Takoorka La"xaad La"aanta (Disability)
Takoorka ku salaysan la"xaad la"aantu waa mid sharci daro ka ah Menesota.
Marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iinsaanka la"xaad la"aantu waa "noocyada la ilaaliyo" Waana sharci daro in si goonaya loola dhaqmo maadaamo aad la"xaad laada"ay sida:
Shaqada, Guriyeynta, Meelaha Dadwaynaha Loo Qoondeeyey, Adeegyada Dadwaynaha, Waxbarashada, Amaahda, Ganacsiga.
waa maxay la"xaad la"aantu
waa maxay "qaabilaad macquul ahi"
maxaa noqon kara takoorka la"xaad la"aanta
Takoorka La"xaad La"aanta (PDF 208kb)
Jinsiyad, Halka aad jinsiyad ahaan ka timid iyo Takoorka Diinta (Race, National Origin, and Religious Discrimination)
Takoor ku salaysan jinsiyad, halka aad jinsiyad ahaan ka timid &ndash; halka tifiirtaadu ka timid iyo diintuba waa sharci daro.
Marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iinsaanka Mensota, jinsiyad, halka jinssiyad ahaan ka timid iyo diintuba waa "noocyada la ilaaliyo." Waana sharci daro in si gaara laguula dhaqmo jinsiyadaada, halka aad jinsiyad ahaan ka timid or ama diin ahaan awgeed. Kuwani waa "meelaha la ilaaliyo"
Shaqada, Guriyeynta, Qaabilaada Dadwaynaha, Adeega Dadwaynaha, Waxbarashada, Amaahda, Ganacsiga *(Diintu kamid aha noocyada la ilaaliyo markay timaad ganacsi).
sida jinsiyada, diinta, iyo halka aad ka timid iskugu xidhan yihiin
maxaan noqon kara jinsiyad, halka aad ka timid ama takoorka diinta
Jinsiyad, Halka aad jinsiyad ahaan ka timid iyo Takoorka Diinta (PDF 205kb)
Takoorka Labka ama Dhidiga (Sex/Gender Discrimination)
Takoorka ku salaysan labka ama dhidigu waa mid sharci daro ka ah Menesota.
Marka loo eego Qodobka Xuquuqul Iinsaanka labka ama dhidigu waa "noocyada la ilaaliyo." Waana sharci daro in si goonaya loola dhaqmo maadaamo aad tahay lab ama dhidig marka loo eego:
Shaqada, Guriyeynta, Qaabilaada Dadwaynaha, Adeegyada Dadwaynaha, Waxbarashada, Amaahda, Ganacsiga.
Waa maxay fadeexada labka ama dhidigu
Aar gudashada lagaa gudanayo maadaamo aad xaraysay dacwad (rogaal celin)
Maxaan noqon kara takoorka labka ama dhidiga
Takoorka Labka ama Dhidiga (PDF 208kb)
Shaxda Ilaalada (Protections Chart)
Gaba gabada Ilaalada
Nooc kasta oo ka tirsan meel lama ilaaliyo. Waxaad eegtaa shaxadani bogan ku qoran. Waxay tilmaamaysaa nooc kasta iyo meelaha la ilaaliyo.
Ilaalooyinka kale ee Qodobka Xuquuqul Iisaanka Menesota
Laguguma ciqaabi karo arimahani:
Ka soo horjeesatid takoor
Inaad saaxiibo yeelato ka mida noocyada la ilaaliyo
Dacwad xaraynta takoorka ama ka cabashada fadeexada ama takoorka
Ka qayb gala baadhitaan ay sameeyaan ururada xuquuqul iisaanku
Waa sharci daro in la taakuleeyo ama la kaalmeeyo takoorka. Tani micnaheedu waxa weeyi qof qof kale kama caawin karo inuu ku dhaqaaqo fal takoora.
Su"aalo iyo Jawaabo ku saabsan Laanta Xuquuqul Iisaanka MN (PDF 199kb)